Stox စျေး - အွန်လိုင်း STX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Stox (STX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Stox (STX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Stox ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $46 308 770.00
volume_24h_usd: $4 039 560.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Stox တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Stox များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
StoxSTX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00999StoxSTX သို့ ယူရိုEUR€0.00851StoxSTX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00766StoxSTX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00917StoxSTX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0901StoxSTX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0634StoxSTX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.223StoxSTX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0375StoxSTX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0133StoxSTX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.014StoxSTX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.224StoxSTX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0774StoxSTX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0538StoxSTX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.745StoxSTX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.68StoxSTX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0137StoxSTX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0152StoxSTX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.311StoxSTX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0694StoxSTX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.06StoxSTX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩11.84StoxSTX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.8StoxSTX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.732StoxSTX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.276
StoxSTX သို့ BitcoinBTC0.0000009 StoxSTX သို့ EthereumETH0.00003 StoxSTX သို့ LitecoinLTC0.000184 StoxSTX သို့ DigitalCashDASH0.000114 StoxSTX သို့ MoneroXMR0.000115 StoxSTX သို့ NxtNXT0.805 StoxSTX သို့ Ethereum ClassicETC0.00148 StoxSTX သို့ DogecoinDOGE3 StoxSTX သို့ ZCashZEC0.000126 StoxSTX သို့ BitsharesBTS0.383 StoxSTX သို့ DigiByteDGB0.332 StoxSTX သို့ RippleXRP0.0354 StoxSTX သို့ BitcoinDarkBTCD0.000349 StoxSTX သို့ PeerCoinPPC0.0348 StoxSTX သို့ CraigsCoinCRAIG4.62 StoxSTX သို့ BitstakeXBS0.432 StoxSTX သို့ PayCoinXPY0.177 StoxSTX သို့ ProsperCoinPRC1.27 StoxSTX သို့ YbCoinYBC0.000005 StoxSTX သို့ DarkKushDANK3.25 StoxSTX သို့ GiveCoinGIVE21.95 StoxSTX သို့ KoboCoinKOBO2.31 StoxSTX သို့ DarkTokenDT0.0092 StoxSTX သို့ CETUS CoinCETI29.26